Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal ‘एमाले सरकारले ल्याएर राखेकाे खाेपसमेत याे सरकारले नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकेन’ - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, २० साउन : राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले वर्तमान सरकार आएदेखि अपराधीकरणको सुरुवात भएको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि देशमा अपराधीकरण र कुशासनको सुरुवात भएको आरोप लगाउनुभएको हो ।
उहाँले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सरकार बनाएको भोलिपल्टै धरौटीमा रिहा गर्नेदेखि मान्छे मार्ने व्यक्तिलाई समेत निकाल्न लागेको भन्दै सरकारले कुशासनको अभ्यास गरेको बताउनुभएको हो ।
सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएर राखेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपसमेत व्यवस्थित रूपमा नागरिकसमक्ष पुर्‍याउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘परमादेश सरकार बनेको अर्को दिनदेखि यो देशमा राजनीतिक अपराधीकरणको सुरुवात भएको छ । हाक्काहाक्की कुशासनको आरम्भ भएको छ । लोकतन्त्र भनेको विधि र पद्धतिमा चल्ने शासन व्यवस्था हो ।
तर आज लोकतन्त्रको नाममा विधि र पद्धतिको धज्जी उडाइएको छ । एमाले सरकारले नेपाली नागरिकलाई पुग्ने गरी खोपको प्रबन्ध गरेको थियो । चिन्ताको विषय, अरूले व्यवस्थापन गरेको खोपको पनि यो सरकारले व्यवस्थित रूपमा नागरिककाेमा पुर्‍याउन सकेन ।
खोप हराए । खोपमा सोर्सफोर्सको कुरा आइरहेको छ । सोर्सफोर्सले खोप लगाउन पाउने, सर्वसाधारण वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
सांसद भट्टराईले अदालत दलीय व्यवस्था र संसदीय परिपाटीको बर्खिलाप गएको भन्दै त्यसका विरुद्ध एमालेले वैचारिक सङ्घर्ष जारी राख्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले अहिले लोकतन्त्रले हारेको र लोकतन्त्रले हार्दा सबै नेताले हार्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको पक्षपोषण भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मानवताविरोधी जघन्य अपराध हो । नेपालीहरूका लागि यो असाध्यै दुःखद र पीडादायी घटना पनि हो ।
परमादेश सरकारले खुट्टा किन कमाएको हो ? भारतीय एसएसबीका जवानले तुइनको तार काटेर जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन् । देखि जान्ने साक्षीहरूले यो कुरा भनिरहेका छन् । बुझ्न बाँकी के छ ? यो मानवतासँग जोडिएको र राष्ट्रियतासँग पनि सम्बन्ध राख्ने घटना हो ।
भारतीय पक्षको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति पनि हो । यस्तो घटनामा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने होइन र ? राजदूतलाई बोलाएर संवाद गर्नुपर्ने होइन र ? तार काटेर घटना घटाउने एसएसबीका जवानलाई तत्काल कारबाही गराउनुपर्ने होइन र ? बेपत्ता जयसिंहको परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन ? तर परमादेश सरकार सुनसान छ । केही गर्न सकिराखेको छैन ।’